राजुकाजी शाक्य – ‘रगत मै बगेको छ, फुटबल’ | Hamro Khelkud
राजुकाजि शाक्य, पूर्वकप्तान – राष्ट्रिय फुटबल टोली
धरानमा जन्मिएँ, ५८ वर्ष अघि । जहिलेदेखि केही बुझ्ने भइयो, सम्झनामा फुटबल खेलेका दिनहरु मात्रै छन् । अरु त सबै झिसमिसे देखिन्छन् ।
सुन–चाँदी व्यावसायीको छोरो भएपनि रहर फुटबल सिवाय अर्को केही भएन । बाले गहना बनाउन लगाउँदा राम्रो काम गर्न सकेको भए सम्भवतः आज फुटबलरको चिनारी समेत हुँदैन थियो होला ।
फुटबलको उर्वरभूमि मानिएको पूर्वमा जन्मन पाउनु मेरा लागि सौभाग्य बन्यो । बा–आमाले नरुचाएपनि फुटबलमा मेरो रुचि घट्न सकेन । हामी अहिलेका भाइहरु झैं व्यावसायिक खेलाडी त बन्न सकेनौं । तर, मेरो खेलाडी जीवन धरानकै छिमेकी–११ क्लबबाट सुरु भयो । त्यसपछि धरान क्लब, सगरमाथा र कोशी अंचलका लागि पनि खेलें । त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीमा समावेस हुने मौका पाएँ । त्यसपछि जनकपुर चुरोट कारखाना र तत्कालिन शाही नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता बलिया टोलीको सदस्य भइयो ।
१७ वर्ष निरन्तर राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी हुन पाउनु मेरो लागि गर्व कै कुरो हो । खेलाडीका रुपमा त्यति लामो समयसम्म मुलुकको जर्सीमाथि हक जमाउन पाउँदा कहिले काहीँ घमण्ड समेत लाग्छ नै । त्यसमाथि ७ वर्ष त मुलुकको कप्तानी नै सम्हालियो । हाम्रो समयमा खेलाडीभन्दा कप्तान बन्नु अलि कठिन कार्य थियो । जिम्मेवारी अलि बढी नै हुन्थ्यो, अहिलेको तुलनामा ।
मैले कप्तानी सम्हाल्दा प्रशिक्षकको पनि सहायक बन्नु पर्थ्यो । मैदानमा कुन खेलाडीलाई कसरी पोजिसनमा राख्ने भन्ने खटन–पटन पनि गर्नु पथ्र्यो । अहिले यस्ता सारा जिम्मा प्रशिक्षकको काँधमा आउँछ । त्यसैले प्रशिक्षक हुँदा टाउको दुखाइ अलि बढी नै हुँदो रहेछ ।
मैले सात वटा दक्षिण एसियाली खेलुकदमा सहभागिता जनाएँ । सबै सहभागितामा घटीमा सेमिफाइनलसम्म त पुगियो नै । तर, ढाकामा सम्पन्न छैटौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आफ्नो कप्तानीमा मुलुकलाई स्वर्ण पदक जिताउँदाको क्षण सम्झंदा भने गर्वले मनै फुलेर आउँछ । दक्षिण एसियाली खेलकुदको त्यो आयोजनामा नेपालले कुनै खेलमा पनि स्वर्ण पदक जित्न सकेको थिएन । स्वर्ण पदकको अन्तिम आशा हामी माथि नै थियो ।
त्यसअघि हामीले भारतसँग कोलकातामा व्यहोरेको चित्त दुख्दो पराजयको बदला पनि लिनु त थियो नै । हामी ढाकाको त्यो फाइनल प्रतिस्पर्धामाको अन्तिम समयसम्म पनि २–१ ले पछाडि थियौं । खेलाडी मात्र होइन, सारा मुलुकले आशा मार्ने बेला आइसकेको अवस्थामा मणि शाहले हानेको फ्रि किक गोलमा परिणत त भयो नै टाइब्रेकरमा हामीले नेपाललाई स्वर्ण पदक पनि दिलायौं । धन्य, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक हामी स्वर्ण पदकबाट बंचित हुनु परेन ।
जीवनमा मैले त्यति तनावपूर्ण खेल कहिल्यै खेलिन । यद्यपि, त्यसअघि कोलकातामा सम्पन्न तेस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा अन्तिम समयमा भारतसँग व्यहोरेको पराजयले पनि कहिले काहीँ मन चसक्क पार्छ । मैले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा खेलाडी, कप्तानका रुपमा मात्र नभएर प्रशिक्षकका रुपमा समेत मुलुकलाई स्वर्ण पदक दिलाएँ । नेपालमा जन्मिएको फुटबलरले जिन्दगीमा योभन्दा बढी उपलब्धि के नै हात पार्ला र ?
हो समयले नै गर्दा आजका खेलाडी झैं दाम कमाउन सकिएन होला । व्यावसायिक बन्न सकिएन होला तर, राष्ट्रका लागि खेल्न पाउनु नै मेरो सफलता हो । मेरो रगतमा अहिले पनि फुटबल नै बगेको छ । म फुटबलभन्दा अरु केही सोच्न सक्दिन । जीवनमा फुटबलभन्दा केही कोर्न सक्दिन । फुटबल बाहेक अरु केही सोचें भने म असफल हुन्छु । पक्का हो ।
फुटबलले मलाई धेरै दिएको छ । दिएको छैन, भन्दिन । रुपकराज शर्मा, सुरेश पन्थी, गणेश थापा, अशोक केसी जस्ता खेलाडीको संगत गर्ने मौका दियो । सन् १९८२ मा नेपाल आएका जर्मन प्रशिक्षक रुडिसँग सिक्ने मौका दियो । रुडिसँगको अनुभव पनि रोचक नै छ । उनी हामीलाई प्रशिक्षण दिन नेपाल आए लगत्तै हाम्रो खेल्न हेर्न आए । हामीले खेलेको देखेर झोंक्किदै मैदानमा छिरे । उनको त्यस बेलाको गालीले सम्भवत नेपाली फुटबलरको खेल्ने शैली नै परिवर्तन गरिदियो ।
खेलाडीलाई मैदानमा सफल बनाउन ‘मोटिभेसन’ गराउन सक्ने व्यक्तिको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ । मैले त्यो गुण शरदचन्द्र शाहमा देखें । मैदानमा छिर्नु अगाडि उनी हाम्रो रगतमा राष्ट्रियता भथ्र्ये । जसले हामीलाई मुलुकका लागि खेल्न उस्काउँथ्यो । हुनत प्राविधिक दृष्टिकोण र अनुशासनमा बलिया थियौं । अहिले फुटबल व्यावसायिक बन्दैछ । यो खुशीको कुरो हो । तर, अनुशासनमा कतै कमी आउन थालेको हो कि भन्ने लाग्न पनि थालेको छ ।
एउटा खेलाडीले जीवनमा धेरै कोणतिर आशाको नजरले हेर्ने गर्छ । आशा अनुरुप नहुँदा दिक्क पनि लाग्दो रहेछ । मलाई सरकारले कहिल्यै माया गरेन । किन हो ? अहिले पनि कल्पंदै छुँ । यति लामो खेलाडी तथा प्रशिक्षक जीवनमा मैले राज्यबाट कहिल्यै विभूषित हुने मौका पाइन । राखेपमा प्रशिक्षकको जागिर त पाइयो तर कहिल्यै प्रमोसन पाइएन । तरपनि, राष्ट्रप्रतिको मेरो मायामा कहिल्यै कमी आउँदैन ।
मैले जीवनमा कमाएका प्रसंसकहरुलाई फुटबलको कुनैपनि भूमिकामा रहेर निराश पार्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउँछु । आखिर मैले कमाएका तिनै प्रससंक हुन् । जो भोलि मेरा मलामी पनि हुन् । खेलेर जीवनमा केही गुमाइन भन्दा–भन्दै पनि पढ्न नसक्दा भने पछुतो लाग्छ । हामीलाई धरानमा कति विद्यालयहरुले पढ्न आइज, जस्तो लेखे पनि पास गराइदिन्छु भन्थ्ये । तर, भविष्य शिक्षासँगै गाँसिएको छ भन्ने हेक्का नहुँदा कतिपय अवसर गुमाएँ पनि ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र कै आधारमा १० वर्ष खेलाडी जीवन बिताएको तत्कालिन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायु सेवा निगम) मा जागिरे हुन पाइन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धाप मारेर जागिर हुन्छ त भन्नु भयो तर, मैले जागिरलाई निरन्तरता पाउन परिक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिन । त्यो धापले मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सकेन । अहिले पनि दिक्क लाग्छ ।
हुनत मैले खेलाडीको उपलब्धिलाई शैक्षिक मान्यता दिनुपर्छ भनेर निकै संघर्ष गरें । तर, असफलता नै हात लाग्यो । अहिले हामीकहाँ मैदानको निकै अभाव देखिएको छ । भएको एउटा रंगशाला पनि असक्त बनेको छ । अहिलेका खेलाडी शारीरिक तथा प्राविधिकरुपमा बलिया छन् । तर, खेल्ने मैदान नै नभए के गर्ने ? कसरी प्रगति गर्ने ? बेलैमा सोच्नु पर्छ ।
साभार– फुटबलर्स मिसन टुगेदर्सले प्रकाशित गरेको फुटबलरको समर्पण फुटबलरलाई नामक स्मारिकाबाट गरिएको हो । मिसनसँग हाम्रो खेलकुद डटकमले अनलाइन सहकार्य गरेकाले आउने दिनमा स्मारिकामा रहेका अन्य लेख क्रमश: प्रकाशित हुनेछ ।
समर्पण फुटबलरका अन्य लेखहरु :